Nchịkọta Google Analytics & Ntọala; Omume Semalt
Mgbe ọ na-abịa iji nyochaa nchịkọta Google na ndị ọzọ, ị ghaghị ịnụrụ "Ana m achọ ndụmọdụ," "Enwetụbeghị m nchịkọta Google," na ihe ndị yiri ya. Artem Abgarian, ọkachamara ọkachamara kwuru na ọ dị mkpa iji ngalaba na Google Analytics ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Gịnị bụ akụkụ?
Na nchịkọta Google, akụkụ bụ ụdị data pụrụ iche ma ọ bụ usoro nke na-enye gị echiche nke ogo nke okporo ụzọ gị - computer services san mateo ca. Nchịkọta Google na-enye anyị ohere dị ukwuu iji melite arụmọrụ zuru oke nke saịtị yana nhazi yana ọnụego bounce nke ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ụdị nke ibe ma ọ bụ isiokwu ndị na-enwetakwu echiche na ọtụtụ nchịkwa ndị dị na saịtị gị na-enweta, ị ga-eme nke ahụ site na iji ngalaba agba. Nke ahụ ga-enyekwara gị aka ịkọwa data gị ka i wee nwee ike ịmatakwu nke ọma na nke ọma karịa na mbụ.
Gini mere i ji choro ngalaba?
Ka m kwuo ebe a na ebe nrụọrụ weebụ gị na data ya enweghị ike chebe ma ọ bụ ejikọta ya nke ọma na-enweghị segmentation. Nke a nwere ike inyere gị aka ịchọta nkwubi okwu ziri ezi. Ndị ọkachamara na-ekwu na data na ozi niile dị na mgbagwoju anya, ya mere, ị ga-enwerịrị nkewa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iji hụ na ndị ọbịa gị na saịtị ahụ, ị ​​ghaghị ịkekọrịta Google Analytics na data ya na ngalaba ma mepụta ihe nzacha dị mkpa..Ejikọtara data ahụ na ị nweghị ike ịmepụta usoro ọ bụla na-enweghị akụkụ nke kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike ịga n'ihu na-akwalite weebụsaịtị na ngwaahịa gị n'ịntanetị, mana ọ dịghị uru ọ bụla na ị gaghị enweta ahịa ọ bụla ma ọ bụ njikọ aka gị.
Olee otú ịmepụta otu n'ime nchịkọta Google?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ngalaba na Google Analytics, ihe mbụ ị ga - eme bụ idezi ihe nzacha ma weghachite ha dabere na ọdịdị nke saịtị gị. Mee ka m kwuo ebe a na ngalaba dị mfe idezi, ihichapụ ma ọ bụ nyegharia ya, ma ị nweghị ike wepu data dịka nke a nwere ike imebi ebe nrụọrụ weebụ gị dum. Nye ọtụtụ n'ime anyị, ọ dịtụbeghị mkpa ịmepụta ngalaba, mana na-enweghị ya, ị gaghị enwe ike ijide n'aka na ị ga-enweta okporo ụzọ dị mma site na engines ọchụchọ .
Ụdị dị iche iche
E nwere ụdị edemede abụọ, ngalaba usoro, na ngalaba omenala. Ngalaba sistemụ bụ nke na-enye atụmatụ na nhọrọ dị iche na nchịkọta Google ma ha enweghị ike ịgbanwe mgbe e kere ha. Otú ọ dị, ha nwere ike gbanwee ebe ọdịda gị yana profaịlụ mgbasa ozi. Ngalaba sistemụ bara uru dịka ha na-enwe mmekọrịta enyi na enyi ma nwee ike inweta ọtụtụ nlele sitere na ngwaọrụ mkpanaka. Ngalaba omenala dị mgbagwoju anya na ndị na-ewu ewu karịa ngalaba usoro. Ha na-enyekwa nhọrọ dị iche iche ịhọrọ site na Google Analytics. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta ngalaba na-ehichapụ ndị ọbịa ahụ na-eji ihe dịkarịa ala atọ karịa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Enwekwara ike ịmepụta ngalaba iji nweta echiche ndị echere mba na ibe weebụ gị. Ihe ndị a niile ga-eme ka arụmọrụ nke saịtị gị dị mma, na àgwà okporo ụzọ gị ga-abawanye mma.